Deadlift, ငါ့ရလဒ်များကို ... | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Deadlift, ငါ့ရလဒ်များကို ...
အလေးမအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှရုရှား 2010-2013gg Powerlifting စားပွဲတင်ခွဲခြားစံချိန်စံညွှန်းများ။
က MS CCM MSMK အမျိုးအစားငါ II ကို III ကိုငါ II ကိုငယ်ရွယ်နုပျိုငယ်ရွယ် III ကို
44.0 200,0 185,0 170,0
48.0 295,0 255,0 235,0 210,0 195,0 180,0
52.0 470,0 395,0 320,0 280,0 257,5 230,0 210,0 190,0
+ 125.0 972,5835,0 730,0 625,0 555,0 520,0 462,5 400,0 380,0
44.0 270,0 235,0 190,0 162,5 142,5 122,5 110,0 100,0
+ 90.0 545,0 455,0 410,0 350,0 317,5 292,5 250,0 227,5 205,0
1 ။ MSIC သည် Norma ထိန်းချုပ်မှုနှင့် platform ပေါ်တွင်သုံးတရားသူကြီးတွေတစ်နိုင်ငံလုံးရှာဖွေရေး၏ရှေ့မှောက်တွင် doping မှဘာသာရပ်ဟာချန်ပီယံရှစ်နှင့်ရုရှား၏ဖလားအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကိုနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
2 ။ က MS သည် Norma, အ ETUC, ချန်ပီယံနှင့်ဖက်ဒရယ်ခရိုင်တွင်ထည့်သွင်းမော်စကိုနှင့် St. ပီတာစဘတ်၏ချန်ပီယံသစ်က MS ရွေးချယ် doping ထိန်းချုပ်မှုနှင့် platform ပေါ်တွင်သုံးတရားသူကြီးတွေတစ်နိုင်ငံလုံးရှာဖွေရေး၏ရှေ့မှောက်တွင်တို့တွင်စံဖြည့်ဆည်းဖို့ဘာသာရပ်အမျိုးသားရေးပြိုင်ပွဲမှာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
3 ။ MMR သည် Norma ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ချန်ပီယံဘာသာရပ်ထက်လျော့နည်းနှစ်ယောက်တရားသူကြီးရှေ့မှောက်တွင်တစ်နိုင်ငံလုံးမဟုတ်ရှာဖွေရေး၏ status များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
4 ။ သည် Norma (ကီထိုင်, ခုံတန်းလျားစာနယ်ဇင်း, deadlift ကိုက်စားခြင်းတည်ရှိသည်) သာ TRX လေ့ကျင့်ခန်း၏ပမာဏအပေါ်ဖျော်ဖြေနေသည်။
5 ။ နှစ်ပေါင်းကာလကိုအတူ 17 နှစ်ပေါင်း 16 အားကစားအမျိုးအစားနှင့်အတူက MS ၏ခေါင်းစဉ်ကာမဂုဏ် 12 နှစ်တာဝန်ပေးအပ်အားကစားရာထူး MSIC ။
ဒါကခွဲခြားသည့်ဇန်နဝါရီလ 01 2010 ထံမှအင်အားသုံးသို့ကြွလာ
ငါ 50 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအတွက်) 250 ဆွဲထုတ်ကောင်းတစ်ဦးရလဒ်
КМС в весовой "до 83" (допустим засушишься) — это 567,5 кг. Условно говоря надо по 213 присесть и потянуть и 141,5 пожать. Думаю ещ месяца3работы "и золотой ключик у нас в кармане". Т. е. на КМС набершь.
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,261 စက္ကန့်ကျော် Generate ။